Mid Ka Mid Ah Hoggaamiye Yaasha Ka Dagaalamaya Kismaanyo Oo Baaq U Soo Diray Somaliland | Salaan Media
Mid Ka Mid Ah Hoggaamiye Yaasha Ka Dagaalamaya Kismaanyo Oo Baaq U Soo Diray Somaliland
June 10, 2013 Kismaayo(SM) Madaxweynaha maamul goboleedka Waamo State oo ka mid ah dhowr maamul oo lagaga dhawaaqay magaaladda Kismaanyo ayaa sheegay inay taageersan-yihiin madaxbanaanida Somaliland, Islamarkaana xukuumadda iyo shacbiga Somaliland baaq u soo diray.
Hoggaamiyaha Waamo State Cumar Buraale Axmed oo xalay waraysi siiyay Wargeyska Saxafi isaga oo jooga magaaladda Kismaanyo ayaa waxa uu ugu horeyn ka waramay dagaallo laba maalmood oo laga soo gudbay ka dhacayay magaaladda Kismaanyo oo uu sheegay inay is bahaysi ahaan ku guulaysteen inay Xeryahoodda ku horjoogaan kooxda Raaskaanbooni. Waxaa kale oo uu tilmaamay in dhibaato xoogan ay ciidamada Kiiniya oo taageeraya kooxda Axmed Madoobe ee Raaskaanbooni ay dhibaato u geysteen dadka shacabka ah. In kasta oo buu yidhi aanay wax awood ah ku lahayn magaaladda Kismaanyo.
“Is bahaysi ahaan afar ayaanu nahay, aniga iyo ninka la yidhaa Barre Hiiraale ayaanu ahayn, waxaana nagu soo biiray nin Hawiye ah oo Gaal-jecel ah iyo Nin Cawro Male ah oo deegaanka ah, labadaas oo reerahooddu iyagana doorteen. Afartayadaasina siyaasiyan isku aragti ayaanu nahay oo waxaa isku kaaya geeyay dulmiga meesha yaala oo aanu ka yeelanay aragti siyaasadeed oo midaysan.” Ayuu yidhi. Waxaana uu intaas ku daray madaxweynaha Waamo State. “Nimankani marka horeba niman magaalada dagan ma’aha. Waxay joogaan oo ay garab-daganyihiin xeryo ay ciidamada Kiinya joogaan oo magaaladda ka baxsan, mar mar ayaa la arkaa nin gaadhi saran oo Madaarka xagiisa u socda oo dhexmaraya. Laakiin, magaaladda waa ilaa 5 Km, anaga ayaana joogna dhamaanteed,”ayuu yidhi Cumar Buraalle.
Waxaa socday olole lagu doonayo in lagu dhex-galo xoogaga ku hirdamaya magaaladda Kismaanyo, sidaas darteed, waxaanu weydiinay waan-waantaasi waxa ka hirgalay, waxaana uu yidhi. “Odayaashu xabad-joojin ayay ku baaqeen, laakiin, marka horeba anagu wax kumaanu duulin, iyaggaa nagu soo duulay. Iyaggaa dekedihii xidhay, garoomadii xidhay. Iyaggaa masuuliyiintii booqashadda ku yimid Kismaanyo iyo cid wal oo ay u arkayeen inay saameyn leedahay is hortaagay.
Markaa haddii ay laba maalmood gudohood wax ku dareemeen, oo wixii ay sameyn lahaayeen ay sameeyeen, balse wixii ay moodayeen aanay noqon. Hadeer waanu ogolaanaynaa xabad joojintaas oo odayaashu waa noo yimaadeen. laakiin, wax wada hadal ah iyo gorgortan kale oo aanu la galaynaa ma jirto, anagana meel ayaa wax noo yaalaan iyagana waanu eegaynaa waxa ay damacsanyihiin.”
Madaxweyne Cumar waxaa uu hore u shaaciyay inuu taageersanyahay Madaxbanaanidda Somaliland, sidaas darteed, waxaanu weydiinay bal in wax xidhiidh ahi ka dhexeeyo Somaliland madaxdaxdeedda iyo haddii uu jiro wax baaq ah oo ay u dirayaan., waxaana uu yidhi. “Annaga Somaliland qadiyaddeenu waa na khusaysaa, maxaa yeelay waa dadkayagii dadka reer Somaliland, dadka reer Djibouti iyo dad badan oo Itoobiya deganba. Marka xagga reeraha laga eegana dadka aanu isku meel ku abtirsano weeye. Siddaas darteed, weligayba qadiyada Somaliland iyo madaxbanaanideeda waan taageerayay ilaa 40 sanadood oo aan ku soo dhex jiray Siyaasadda. Dhowr iyo labaatankii sanadood ee Soomaaliya burbursanaydna sidoo kale, shirarkii la qabanayay ee aan ka qaybgalay waanu taageeraynay mar walba ilaa shirkii Carta ilaa kan ugu danbeeyay in la taageero waxa ay Somaliland qabsatay iyo gooni isu taageedda mar haddii aanay jirin meel loogu yeedho oo Soomaaliya la yidhaa. Haddii la wadahadlayo marka Soomaaliya wax sameysato ee dawlad noqoto ee ay gaadho halka Somaliland marayso hala wada hadalo ayaan taagnaa haddana taaganahay.
Laakiin, siyaasiyan waan ka soo horjeeday annigaa gubanayee kaalay ila gubo. Markaa Somaliland gooni isu taageedda waan taageersanahay, waxaan iyagana leeyahay Xaalada ka taagan Soomaaliya waad la socotaane waa in aad Aqoonsataan maamulkayagga, xidhiidhkayaga oo awalba wanaagsanaana waxaan leeyahay aynu sii wanaajino.” Ayuu yidhi